संघीय संसदका १५ जनालाई कोरोना पुष्टि, प्रधानमन्त्री ओलीको पनि लिइयो स्वाव – Classic Khabar
May 7, 2021 281
संघीय संसदका १५ जना कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएको छ । संघीय संसद सचिवालयका अनुसार बुधबार गरिएको पीसिआर परीक्षण गरिएका १५ कर्मचारीलाई कोरोना पुष्टि भएको हो । उनीहरुको स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको सचिवालयले जनाएको छ ।बैशाख २७ गते संसद बैठक बस्ने भएपछि सांसद र कर्मचारीको स्वाव परिक्षण गरिएको थियो । बैठक बस्नु अघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पनि स्वाव लिइएको छ ।
पिसिआर परीक्षणका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको स्वाव संकलन गरिएको हो ।शुक्रबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीसहित १ सय बढीको स्वाव संकलन गरिएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहाकार सूर्य थापाले जनाएका छन् । ओलीसँगै बालुवाटारमा रहने स्वकीय, निजी सचिवालय, सुरक्षा निकाय र चालकहरूसहित १ सय जनाभन्दा बढीको स्वाव संकलन गरिएको हो ।
यसैबीच संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत उपसचिव कृष्ण खनालको कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ । केहि महिना अघि मात्र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट संसद सचिवालयमा सरुवा भएर आएका उपसचिव खनालको शुक्रबार बिहान मृत्यु भएको संसद सचिवालयले जनाएको हो ।उपसचिव खनाल सचिवालयको कानून शाखामा कार्यरत रहेका थिए । सचिवालयका अनुसार खनालको पत्थरीको उपचारका लागि भर्खरै शल्यक्रिया भएको र मुटु सम्बन्धी पनि स्वास्थ्य समस्या रहेको थियो ।
Prevप्रकाश सुवेदीको निलम्बन फुकुवा, शिल्पाले दिएको उजुरी के भयो ? (भिडियो हेर्नुस्)
Nextखोपको दोस्रो मात्रा पुरा गर्नेहरु पनि किन हुँदैछन् संक्रमित ? डाक्टरले देखाए यस्तो कारण